SIDEE ARDAYDA SOOMAALIYED EE DALALKA DIBADAHA WAX KABARATA MUSTAQBALKA DALKA WAX UGA BADALI KARAN KARAAN.
Anigoo ah arday soomaaliyeed waxna ka barta Dalka Jordan jaamacada Jordan University of Science and Technology(J.U.S.T) ayaan waxaan go'aan saday in aan maqaalkan wax ka qoro maadaama ay jiraan arday soomaaliyed oo badan oo dalalka dibadaha wax kabarata mida kale waxaan iswaydiiyaa mar walba sidee ardaydan badani mustaqbalka dhow dalka wax ugu qaban karaan .
Mase dhici kartaa in ay ardaydu laf ahan toodu ku kala qaybsan yihiin siyasada dalka ka jirta?.
Qaarkoodse qabiilku masaamayn karaa?
Mase jiraan ururo arday soomaaliyed oo ku salaysan hab qabiil ama siyaasad?
Dhamaan waxaan jeclahay in aad su'aalahan iswaydiisaan iyo waliba sida ay latahay ruux walba oo ka mid ah akhristayaasha sharafta leh.
Ardayda soomaaliyeed manta waxay wax ku bartan duruufo badan oo aad dareemi kartaan kuwaas oo isugu jira kuwo dhaqaale kuwo ammaan iyo waxyaabo kale oo aad u badan.
Hadaba ardayda sooamaliyeed waxaan aaminsanahay mustaqbalka dhow waxay noqon karaan kuwo wax badan wax kabadala xaga siyaasadda dalka,nolosha caafimaadka ,waxbarashada iyo dhamaan qaybaha bulshada.
Laakiin waa habkee.
Hadii ardayda soomaaliyeed ee hada dalal badan wax kabarata ay noqdaan arday isku xiran kuwaas oo leh ururo ku salaysan hab ka madax banan qabiil ama siyaasad kuwaas oo iskugu xiran habka is fahanka fiican ee ah hab cilmiyeed iyo sida wax loo wada qaban karo waxay noqon karaan dad wax badan bali kara tusaalena u noqon kara jiilka barito soo bixi donaa .
Waxaa kaloo muhim ah in wax badan ardaydu wax ka ogaadaan waxa loo yaqaan wadaninimo ama wadan jacayl manta waxyaabaha dhabar jabka ah waxaa ka mid ah in ay naga maqantahay dalka jacayl .
Waxaan aad u murugoodaa marka aan arko dalka aan kunoolahay gaar ahaan ardayda aan wax isla barano sida wadankooda ay u jecelyihiin iyo waliba sida deepka ah ee ay ugu dheertahay wadaniyada ama dal jacaylka .
Hadaba waxaan markhaati u ahay in ay jiraan ururo badan kuwaas ka dhisan wadamo badan oo arday soomaaliyeed wax ka bartaan sida SUDAN ,YEMEN, JORDAN,PAKISTAN, MALAYSIA iyo kuwa kale oo badan kuwaas oo dhamaantood ka madax banaan qabiil iyo qurnkiisa.
Tusaale ahaan ururadan hadii ay dhamaantood samaystan hal urur oo isku xiri dhamaan wadama aan soo sheegay isku hadafna noqdaan iyo isku target waxaan dareemi karnaa in barito laheli doono dhalinyaro badan oo jaamiciyin ah oo isku xiran kuwaas oo saamayn ku yeelan kara nolosha dalka soomaaliya waayo mar dhow waxaan rajaynayaa in ay dhamaandoonto duruufaha hada lagu jiro taasoo aad moodo in ay jiraan dad badan oo quustay lakin arintu sidan way ka baddalaan doontaa insha allah.
Xiliga dhow waxaan rajaynayaa in ay soo bixi doonaa arday badan oo fikirkoodu ka madax banaan yahay qabiilka ragaadsaday bulshada soomaaliyeed .
Bulshada waxa ugu horeeya ee wax lagu fahansiin karo ayaa waxay tahay in ay tacliimta bartaan sidii uu qofku u kala fahmo qaladka iyo saxda waayo cilada ugu way ee soomaalida haysata ayaa waxaa ka mid ah jahliga isagoo ruuxu uuna garanayn waxa saxda ah iyo kan qaladka ah.
Hadaba anigoo soo koobayaa waxan dhamaan ardayda soomaaliyeed ugu baaqayaa qodobadan soo socda in ay tix galiyaan si ay waxbarashadoodu u noqoto mid mira dhasha.
1. Ardaygu waa in uu leeyahay ujeedooyin iyo hadaf ku aadan waxbarashadiisa.
2. Waa in aan ku xisaabtantaa in aad ka timid dal uuna ruuxna u maqnayn oo adiga iyo kuwa kula midka ah sugayo.
3. Waa in aadan ku fikirin in aad wax u qabato kali ah qoyskaaga laakiin aad ku fikirtaa sida aad bulsha waynta soomaaliyeed wax ugu qaban lahayd.
4. Waa in aad aduunka saamayn ku yeelata aduunkana aad wax kusoo kordhisaa gaar ahaan majaalka takhasuskaaga waayo waxaa fiican in aad aduunka wax laguugu xasuusto kaga tagto.
5. Waxaa muhim ah in aad ogataa in wakhtigu uu yahay hantida dhabta ah ama ra'samaalka aad haysato, inta badan waxay caan ku tahay soomaalidu fadhi ku dirirka iyo warka aadka u tirada badan een macnaha ku dhisnayn.
6. Isku day in aad wax badan aduunka ka ogaataa dhinac walba oo aad noqotaa ruux macluumaad badan aruuriya khibrad badana leh.
Hadaba hadii aad tahay arday soomaaliyeed waxaad ogaataa in aad ka timid dal gubanaya oo dhibaatooyin badan haystaan adigana aad tahay ruuxii damin lahaa dabkaas iskabadaa inaad sii shido .
Ahmed-dayib moh'ed abdi.